M̀ Kwesịrị Ikpegara Ndị Sent Ekpere? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Georgian German Greek Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kachin Kikamba Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mapudungun Moore Myanmar Norwegian Nyungwe Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Mba. Baịbụl kwuru na ọ bụ naanị Chineke ka anyị ga na-ekpegara ekpere n’aha Jizọs. Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “ Kpeenụ ekpere otú a: “Nna anyị nke bi n’eluigwe, ka e doo aha gị nsọ. ” (Matiu 6:9) O nwetụghị mgbe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha kpegara ndị sent, ndị mmụọ ozi, ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ ekpere, ma e wezụga Chineke.
Jizọs gwakwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “ Ọ bụ m bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ. ” (Jọn 14:6) Ọ bụ naanị Jizọs ka Chineke họpụtara ka ọ na-arịọchitere anyị arịrịọ.—Ndị Hibru 7:25.
Ò nwere ihe o mere ma m na-ekpegara Chineke ekpere, na-ekpegakwara ndị sent ekpere?
Chineke kwuru n’Iwu Iri ahụ o nyere ụmụ Izrel, sị: “ Mụ Jehova Chineke gị bụ Chineke ekworo. ” (Ọpụpụ 20:5, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.) Olee otú Chineke si bụrụ Chineke “ekworo”? Otú Baịbụl ụfọdụ si sụgharịa ya bụ na Chineke “ chọrọ ofufe a na-ekewaghị ekewa. ” Chineke chọrọ ka ọ bụrụ naanị ya ka anyị ga na-efe ofufe. Ekpere sokwa n’ofufe a ga na-enye naanị ya.—Aịzaya 48:11.
Ọ bụrụ na anyị ekpegara onye ọ bụla ọzọ ekpere, ọ sọgodị ya ya bụrụ ndị sent ma ọ bụ ndị mmụọ ozi dị nsọ, anyị na-akpasu Chineke iwe. Mgbe Jọn onyeozi chọrọ ife otu mmụọ ozi ofufe, mmụọ ozi ahụ gwara ya ka ọ ghara ime otú ahụ. Ọ sịrị Jọn: “ Emela ya! Abụ m naanị ohu ibe gị na ohu ụmụnna gị ndị nwere ọrụ ịgba àmà banyere Jizọs. Fee Chineke. ”—Mkpughe 19:10.